Warshada Xafiisyada Kuraasta Qolka Kulanka Shiinaha iyo alaab-qeybiyeyaasha | GOODTONE
Gudoomiyaasha Xafiiska Qolka Kulanka
Kursiga dhabarka ee xafiiska dhabarka sare; Isbuunyada caaryada ee kursiga & dhabarka; Cududda aluminium ee la laalay; Jarmalka "Bock" habka xakamaynta siligga, 3 booska quful, kursi la simbiriirixan, qaybta dambe iyo kursiga isku xirka waa aluminium,
; Φ60MM PU caster, moodeelku waa D65Y80 KGS fasalka 4 gaaslift
Midabka aluminium: Silban, qalin dhalaalaya
Qalab: Maqaar, Microfiber PU, Harag badhkeed, maqaar yar-yar, maqaar buuxa oo Anline ah
Kursiga: Cawlan, Madow, Brown Fudud, Buluug, Cool Cawlan, Burwon
Qaabka Silban, qalin dhalaalaya
Waxaan sidoo kale bixinnaa adeegyada isku dhafka alaabta iyo soo saarista. Waxaan leenahay warshad noo gaar ah iyo xafiiska ilaha. Waxaan ku siin karnaa ku dhawaad ​​nooc kasta oo badeecado ah oo laxiriira noocyada kala duwan ee alaabadayada casriga casriga ah ee la hakiyay Aluminium go'an Xafiiska Gacmaha Qalabka Ergonomic Tayada Sare ee PU Kursiga Xafiiska Maqaarka , Waxaan ixtiraameynaa maamulaha asaasiga ah ee Honesty in business, mudnaanta shirkadda iyo will do our great si loo siiyo macaamiisheena alaabo tayo sare leh iyo bixiye fantastik ah.
Waxaan sidoo kale bixinnaa adeegyada isku dhafka alaabta iyo soo saarista. Waxaan leenahay warshad noo gaar ah iyo xafiiska ilaha. Waxaan ku siin karnaa ku dhawaad ​​nooc kasta oo badeecado ah oo laxiriira kala duwanaanta alaabtayadaKursiga qolka fadhiga ee Shiinaha, Guddoomiyaha Xafiiska Hargaha, kursiga xafiiska ee shirkadda, Tayo wanaagsan iyo qiimo macquul ah ayaa noo keenay macaamiil deggan iyo sumcad sare. Bixinta 'Alaab Tayo leh, Adeeg aad u Wanaagsan, Qiimayaal Tartan leh iyo Bixin Degdega ah', waxaan hadda sugeynay inaan xitaa iskaashi weyn la yeelanno macaamiisha dibadda iyadoo ku saleysan faa'iidooyinka labada dhinac. Waxaan si niyad ah uga shaqayn doonaa si aan u wanaajino xalalkayaga iyo adeegyadayada. Waxa kale oo aanu balan qaadaynaa in aanu si wada jir ah ula shaqayno la-hawlgalayaasha ganacsiga si aanu kor ugu qaadno wada shaqaynteena meel sare oo aanu wadaagno guusha. Si diiran kuugu soo dhawoow inaad si daacad ah u booqato warshadeena.
Naqshadeynta kursiga xafiiska ee casriga ah waa inuu ka fekero macaamilka ilaa dhegta, si uu u fahmo baahidooda ka dibna isku dayo sida ugu fiican si loo naqshadeeyo kursi leh hawlo badan oo aasaasi ah. Habka naqshadeynta ARICO, welwelka ugu mudan waa is burinaya naqshadeynta.Waxay u baahan tahay khadad fudud oo nadiif ah iyo sidoo kale hawlo badan. Naqshadeeyuhu wuxuu fududeeyaa nidaamka guga si loo yareeyo xajmiga habka.
German Deigner Peter oo ka shaqeeya Horn Design and Engineering oo ah shirkad caan ah oo ka shaqaysa naqshadaynta warshadaha iyo horumarinta wax soo saarka, helaysa abaal-marin aan dhammaad lahayn sida Red Dot Design Award.IF Design Award iyo Abaalmarinta Nakhshad Jarmal.Based on Dresden Germany.Horn Design and Engineering ayaa hal mar loogu talagalay mid ka mid ah kuraasta xafiiska ee ugu iibinta fiican ee shirkadaha xafiiska weyn ee xafiiska.
Sheekada naqshadeynta ARICO
Geedi socodka dib u eegista macaamiisha, baahiyaha suuqa cusub ayaa la ogaaday. Iyadoo loo eegayo dareenka joogtada ah ee horumarinta iyo isbeddelka xafiisyada gudaha iyo ururinta jawaab-celinta macaamiisha, Goodtone waxay ogaatay in ay jirto la'aanta kursi maqaar oo caato ah oo leh dareen xooggan oo naqshad gaar ah oo loogu talagalay maamulayaasha sare ee suuqa gudaha. Si loo buuxiyo booskan bannaan ee suuqa, Goodtone waxa uu martiqaad iskaashi la sameeyay nashqadeeyaha Jarmal ee Peter Horn oo ku guulaystay Abaalmarinta Naqshadeynta Dhibcaha Cas iyo IF Design Award, waxaana soo baxay taxanaha ARICO. Laba, shan dib-u-eegis, tusaalaha ayaa bilaabmaya inuu soo muuqdo Habka xidhiidhka joogtada ah iyo wadahadalka naqshadeeyayaasha, qorshaha naqshadaynta ARICO sidoo kale si isdaba joog ah ayaa loo hagaajiyaa. ARICO-ka aad maanta arki karto aad ayuu uga duwan yahay nooca koowaad ee ARICO. Waa nooca ugu wanaagsan ka dib afgembi iyo daraasiin isbeddello hagaajin ah.
Isticmaalka xaaladaha xafiisyada maamulka sare ama qolalka shirarka ee dhamaadka-sare, Goodtone waxay si gaar ah diiradda u saartaa isku-dubbaridka raaxada iyo bilicda ARICO, waxayna gelisay waqti iyo kheyraad badan si faahfaahsan.
Waxaan leenahay warshad noo gaar ah iyo xafiiska ilaha. Waxaan haynaa ilaa 10 nooc oo kursi oo xafiisyo taxane ah. Waxaan ku sharfeynaa maamuleheena asaasiga ah ee daacadnimada ganacsiga, mudnaanta shirkadda waxaanan ku dadaali doonaa inaan siino macaamiisheena alaab tayo sare leh iyo bixiye fantastik ah.
Qiimaha macquulka ah ee kursiga xafiiska Shiinaha, Kursiga qolka fadhiga, Kursiga Lobby, Tayada wanaagsan iyo qiimaha macquulka ah ayaa noo keenay macaamiisha deggan iyo sumcad sare. Bixinta 'Alaab Tayo leh, Adeeg aad u Wanaagsan, Qiimayaal Tartan leh iyo Bixin Degdega ah', waxaan hadda sugeynay inaan xitaa iskaashi weyn la yeelanno macaamiisha dibadda iyadoo ku saleysan faa'iidooyinka labada dhinac. Waxaan si niyad ah uga shaqayn doonaa si aan u wanaajino xalalkayaga iyo adeegyadayada. Waxa kale oo aanu balan qaadaynaa in aanu si wada jir ah ula shaqayno la-hawlgalayaasha ganacsiga si aanu kor ugu qaadno wada shaqaynteena meel sare oo aanu wadaagno guusha. Si diiran kuugu soo dhawoow inaad si daacad ah u booqato warshadeena.
Hore: Kursiga Xafiiska Hargaha ee Ergonomic Dhabar Hoose
Xiga: Kursiga maqaarka ee Ergonomic ee rasmiga ah
Guddoomiyaha Fulinta ee raaxada
kursiga xafiiska ee shirkadda
Ergonomic Swivel Guddoomiyaha Xafiiska
Guddoomiyaha Xafiiska oo leh kursiga madaxa
Warshada Tayada Sare ee Xafiiska Casriga ah
Xafiiska Guddoomiyaha Mesh